Askar Mareykan ah oo lagu laayey qaraxyada Kabul - Axadle Wararka Maanta
Askar Mareykan ah oo lagu laayey qaraxyada Kabul
Kabul (Axadle) – Ugu yaraan 12 askari oo ka tirsan ciidamada Marines-ka Mareykanka ayaa ku dhintay labada qarax ee lala beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha militariga.
Mid ka mid ah qaraxyada ayaa waxaa fuliyey qof is-miidaamiyey oo soo xirtay jaakad walxaha qarxa lagu soo xiray, halka qaraxa labaad uu ahaa mid baabuur. Waxaa sidoo kale jiray rag hubeysan oo rasaas furayey.
Sidoo kale 60 qof oo shacab Afghanistan ah ayaa ku dhintay, 200 oo kalena waa ku dhaawacmeen qaraxyada, oo ay fuliyeen dad is-miidaamiyey, sida uu sheegay mas’uul ka tirsan ururka Taalibaan. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur.